Health Archives - Page2of 21 - The Lobby
ယခုလတ်တလော COVID -19 ရောဂါကြောင့် အမောဖေါက်ပြီး အောက်စီဂျင်မရကြသောလူနာများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အောက်စီဂျင်လည်းမရှိ ၊ ဆေးရုံလည်း တက်လို့ အရမ်းခက်တာကြောင့် အိမ်မှာမောရင်း သေဆုံးကြရတဲ့ လူနာတွေ လျော့ကျစေရန် အလို့ငှာ စေတနာဖြင့် ဤစာကို ရေးသားအပ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး အသိပေးလိုသည်မှာ COVID ရောဂါဖြစ်သူတိုင်း Oxygen မလိုပါ။ ရောဂါဖြစ်သူအားလုံး၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ oxygen လိုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယ အသိပေးလိုသည်မှာ COVID ရောဂါဖြစ်သူတိုင်းမသေပါ။ လူနာစုစုပေါင်း၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ သေဆုံးပါသည်။ အမောဖောက်လူနာအား ပြုစုဖို့ အောက်ပါအချက်များကို နားလည်ထားရပါမည်။အမောဖောက်ခြင်းသည် အကြောင်း ၂ ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ A. ခန္ဓာကိုယ်သို့ oxygenContinue Reading
အသက်ရှူလို့ မဝဘူး ဆိုသူများ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ…
အသက်ရှူလို့မဝဘူး ဆိုရင် တော်တော်များများက စိုးရိမ်ပူပန်ကြီးစွာနဲ့ပဲ “နှလုံးများမကောင်းတာလား? အဆုတ်များ ပြသနာကြီးဖြစ်နေပြီလား”လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ။ တကယ်က အဲ့တာတွေထက်ပိုတဲ့အကြောင်းအရင်းများစွာ ရှိပါသေးတယ်။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ .. ၁. စိတ်ဖိစီးမှုများလို့ မထင်မှတ်လောက်အောင်ကို စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး အသက်ရှူမဝ၊ အသက်ရှူကြပ်တဲ့လူတွေများပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ ခံစားရသူဟာ အသက်ရှူမဝတာအပြင် အသက်ရှူနှုန်းမြန်တာ၊ ခေါင်းမူးဝေတာ၊ စိတ် ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်တာ၊ ကြွက်သားတောင့်တင်းတာတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ ၂- အစာချဉ်ပြန် ရောဂါရှိတာ တော်တော်များများက အသင်ရှူမဝတာ နှလုံးတို ၊ အဆုတ်တို့ကို သိထားပေမယ့် တကယ်တော့ အစာအိမ်က အက်ဆစ်ဓာတ်တွေထွက်တာများပြီး အစာမျိုပြွန်ကိုတက်လာတာ ကလည်း အသက်ရှုမဝဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအခါမှာ … အစာမျိုချရင်နာတာ ရင်ခေါင်းမှာ တစ်ခုခုဆို့သလိုခံစားရတာ ရင်ဘက်အောင့်တာContinue Reading
ကိုဗစ်ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ကျလို့ ဆေးရုံတက်ချင်တယ်၊ ကွာရန်တင်းဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်…
ကိုဗစ်ကြောင့် အောက်ဆီဂျင်ကျလို့ ဆေးရုံတက်ချင်တယ်၊ကွာရန်တင်းဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါ ပုဂ္ဂလိက Lab တွေမှာPositive လား Negative လား စစ်ဆေးနိုင်ပါပြီ။ Positive ဖြစ်ခဲ့ရင် အဲ့ဒိ Lab တွေကနေ တိုင်းကျန်းမာရေးကို တိုက်ရိုက်သတင်းပို့‌ပေးပါတယ်။ ပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့ ဒေသန္တရဆေးခန်းတွေကနေ တဆင့်ကျန်တာ ဆက်လုပ်လို့ရပါပြီ။ COVID-19 ရောဂါရှာဖွေ ခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂလိက ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်း ၄ ခု + ဆေးရုံ ၁၂ရုံ တည်ရာလိပ်စာ ဆက်သွယ်ရန် ဆရာဝန်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ။ ၁။ N Health Myanmar Laboratoryရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်ဒေါက်တာခင်မောင်ထွေး📲 ၀၉၄၄၇၂၂၂၃၂၆ J။ Aye Laboratoryရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊လမ်းမတော်မြို့နယ်ဒေါက်တာဝင်းသိန်း📲 ၀၉၄၅၂၆၆၈၂၁၆ ၃။ YangonContinue Reading
ကျန်းမာရေးအတွက် သင် ဘယ်လို စားသုံးရမလဲ???
In: COVID-19, Editor Choice, Health
ဘာစားရင် ဘာပျောက်တယ် ၊ ဘာလုပ်ပေးရင် ဘာဖြစ်တယ် ၊ ဘာသီးစားပေးရတယ် ၊ ဘာအရွက်စားပေးရတယ် ၊ဘာမစားနဲ့ ညာမစားနဲ့ ၊ ဘာကောင်းတယ် ညာကောင်းတယ် နဲ့… ဆေးနည်းတွေ တင်တင်ပေးကြတဲ့သူတွေသည်ကျန်းမာရေးဌာနက လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဖာသာ စဉ်းစားတွေးတောပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တာ စားပါ ၊အဟာရဖြစ်စေမယ့် အစားအစာဆို စားသာစား ၊ တွယ်သာတွယ် ၊ အုပ်သာအုပ် ခြင့်ချိန်ပြီး စားဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။ ကိုယ်စားလိုက်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ?ဘယ်လို အခြေနေတွေ ကြုံရနိုင်သလဲ?ဘယ်လို အကျိုးဆက်တွေ ခံရနိုင်သလဲ? ကိုယ့်ကျန်းမာရေး နဲ့ ကိုယ်ခံနိုင်ရည် နဲ့ ရာသီဥတု အနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး ရွေးချယ်စားတတ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အဓိက ချွဲသလိပ်မထစေဖို့ နဲ့Continue Reading
ကိုဗစ်ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် ဒါတွေလုပ်ကြည့်ပါ
ဖြစ်တဲ့သူတွေ များလာပြီ။ကုထုံးတွေလည်း များလာပြီ။အဓိကအကျဆုံးက အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကိုဂရုစိုက်ဖို့ပါဘဲ။ နှာခေါင်းပိတ်ရင် ပွင့်အောင် မလုပ်ပါနဲ့။နှာခေါင်းပိတ်တယ်ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်ကို နှာခေါင်းက ရှေ့ဆုံးက ခုခံနေတဲ့သဘောပါ။ နှာခေါင်းပိတ်လို့ အသက်ရှုမဝရင် ပါးစပ်နဲ့ရှုပါ။နှာရည်တွေထွက်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်ကို ရှေ့ဆက်မသွားအောင် နှာရည်တွေက ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။နှာခေါင်းပွင့်အောင် အနံ့ပြင်းတဲ့အရာတွေ မရှုကြပါနဲ့။ နှာခေါင်းအမြှေးပါး ပျက်စီးသွားရင် ဗိုင်းရပ်က နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ချောင်းဆိုးပြီဆိုရင် ဗိုင်းရပ်က လေပြွန်ထဲရောက်ပါပြီ။ ချွဲသလိပ်တွေ ထွက်ရင်ကောင်းပါတယ်။ဗိုင်းရပ်ကို ချွဲတွေက ထိန်းချုပ်နေတာပါ။ချွဲထွက်ရင် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကျဉ်းသွားပြီး အောက်စီဂျင်ကျတတ်ပါတယ်။ ချွဲ ပျော်အောင် အကောင်းဆုံးက ရေနွေးပူပူခဏခဏ သောက်ပေးပါ။နွေးနွေးထွေးထွေးနေပါ။ သိပ်မပြင်းတဲ့ antibiotic ပိုးသတ်ဆေး တစ်ခုခု သောက်ပါ။ဖျားရင် ပါရာစီတမော သောက်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ဝမ်းမချုပ်ပါစေနဲ့။ဝမ်းချုပ်ရင် ချောင်းဆိုးမပျောက်ပါ။ ရေနွေးပူပူ ခဏခဏ သောက်ပါ။‌ရိုးရိုးရေလည်းContinue Reading
ဆရာဝန်များက အဆုတ်သမားအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးက အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလို့ ဆိုပါတယ်။ လေ့ကျင့်ရေး ဆရာဝန်တစ်ဦးက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပုံကို သင်ပေးတဲ့အတိုင်း၊ အသက်ရှူမဝဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အဲ့အတိုင်းလုပ်တာ တကယ်အသက်ရှူဝလာပါတယ်။ အိပ်ရာက မထခင် အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးလိုက်ရင် သက်သာသွားကြတာ များပါတယ်။ ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို ဒီနည်းပြောပါတယ်။ သူက အိမ်ကနေပဲ သူ့ဟာသူ ကုပါတယ်။ (အပြင်းထန်ခံစားရတဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အနံ့ပျောက်၊ အဖျားအနည်းငယ်ဝင်ရုံပါ) အောက်ဆီဂျင် ကျလာတဲ့အချိန်မှာ အဲ့လို အသက်ရှူကြည့်တာ ပြန်ပြည့်လာတယ် ဆိုပါတယ်။ အကျိုး ကျိန်းသေရှိပါတယ်။ သာမန်လူများလည်း လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ (1) ပက်လက်လှန် ပြင်ညီ အနေအထားနဲ့နေပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားပေါ် ယှက်တင်ထားပါ။ နှာခေါင်းကနေ လေကို ဗိုက်ဖောင်းကားလာအောင် ရှူသွင်းပါ။Continue Reading
အဆုတ်ကို အားကောင်းစေပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်လို့ရတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်း(၅)မျိုး••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
၁။ ရေနွေးငွေ့ ရှုခြင်း ရေနွေးငွေ့ရှုခြင်းသည် အဆုတ်လမ်းကြောင်းပွင့်စေပြီး အချွဲများ ပျော်စေပါတယ်။ အဆုတ်မကောင်းသောသူများသည် အေးသောအချိန် သို့မဟုတ် ပူသောအချိန်တွင် မိမိအဆုတ်လက္ခဏာ ပိုဆိုးတတ်ကြောင်း သတိပြုမိတတ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် အဆုတ်တွင် ချွဲဆို့တတ်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ကြောင့် လေကို စိုစွတ်နွေးစေပြီး ပျော်ဝင်လွယ်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ရှုခြင်းသည် ချွဲပိတ်ခြင်းကို ချက်ချင်းသက်သာကာ အသက်ရှုလို့ ပိုကောင်းပါတယ်။ လေပြွန်ကျဉ်းလူနာများကို လေ့လာချက်အရ ရေနွေးငွေ့ရှုနေသောသူများသည် သိသာစွာ အသက်ရှုနူန်းနှင့် နှလုံးခုန်ထိန်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ၂။ အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် အသက်ရှူတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အသက်ကို ဝမ်းဗိုက်ထဲထိရောက်အောင် ရှူရတာပါ။ ရင်ဝမ်းခြားမြှေး ကြွက်သားကို ကျုံ့ဆန့်ပေးပြီး သန်မာလာစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံးContinue Reading
ဒီလိုအချိန်မှာ ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ ဂျင်းတွေ များများ စားပေးရမယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဘာအတွက် ဘယ်လို ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 1 .ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်ဖြူမှာ ပါ၀င်တဲ့ ဓါတ်ပေါင်းတွေက အဆုပ်ရဲ့အရောင်ကို လျော့စေတယ်။ ပန်းနာရောဂါကို ကောင်းစေတယ်။ ချောင်းဆိုးတာကို ပြန်ကောင်းစေတယ်။ကြက်သွန်ဖြူကို ပုံမှန်စားရင် ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေရဲ့ 40% အဆုပ်ကို အဆုပ်ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်။2.ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်နီမှာ ဖဒရိုနိုက်ဓာတ်ပေါင်း များစွာပါ၀င်တယ်။ အဲဒီဓာတ်ပေါင်းဟာ ဆန့်ကျင် ဓာတ်တိုးပစ္စည်း ဖြစ်တယ်။ သွေး‌ကြောမျှင်ရဲ့ နံရံတွေကို ပိုသန်မာစေတယ်။ အဆုပ်ရဲ့ အတွင်းနံရံတွေကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ် ကောင်းစေတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းမူကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အဆုပ်ပြွန်တွေကိုContinue Reading
ကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ သွေးခဲမှာကို ကြောက်နေလား ?
ဒီအချက်တွေ လိုက်နာပေးပါ ကိုဗစ်ရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတခုကတော့ သွေးခဲတာပါပဲ။ သွေးခဲတွေဟာ နှလုံးမှာသွားပိတ်နိုင်သလို ဦးနှောက်သွေးကြောတွေမှာလဲ ပိတ်နိုင်တဲ့အတွက် သတိထားရမယ့် အခြေအနေတရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သူတွေမှာ လိုအပ်ရင် သွေးကျဲဆေး သောက်ရ/ထိုးရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေ သွေးခဲနိုင်ခြေ များသလဲ? အသက် ၆၀ အထက် လူကြီးများ၊ မူလက သွေးခဲ ရောဂါအခံရှိသူများ၊ နှလုံးရောဂါ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ စသည့်ရောဂါအခံ ရှိသူများ။ မထနိုင် အိပ်ရာထဲ လဲနေသူများ၊ အဝလွန်သူများ တားဆေး၊ ဟော်မုန်းဆေး သောက်နေသူများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ဒါဆို သွေးခဲနိုင်ခြေကို ဘယ်လိုလျော့ချရမလဲ? လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေပါ။ အိပ်ရာထဲချည်း လှဲမနေပါနဲ့။ အိပ်ရာထဲမှာပဲ အမြဲလှဲနေရင်Continue Reading
ထူးခြားတဲ့ “Covid Delta” မျိုးစိတ်သစ်
In: Breaking News, COVID-19, Health
(ဖတ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ မြင်နေရတာ ဒီအတိုင်းတစ်ပုံစံထဲပါ) ကိုဗစ်ဟာ မူလဗီဇကနေ Alpha & Beta & Delta & Kappa ဆိုတဲ့ ဗီဇပြောင်းပိုးတွေ တဆင့်ပြီးတဆင့် ထပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဗီဇပြောင်းပိုးဖြစ်တဲ့ Alpha ကိုတော့ အင်္ဂလန်မှာတွေ့ခဲ့ရပြီး Beta ကိုတော့ အာဖရိက နဲ့ Delta & Kappa တွေကိုတော့ အိန္ဒိယမှာ တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ အခု ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ ဒီဗီဇပြောင်းပိုး ၃ မျိုးစလုံးတွေ့နေရတယ်လို့ အချို့စာတွေမှာ ဖတ်ရသလို၊ ဒီအထဲမှာမှ Covid-Delta မျိုးစိတ်အသစ်လက္ခဏာက အတော်ထူးခြားတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒီဗီဇပြောင်းCovid-Delta ဟာ အခြားပိုးတွေနဲ့ သိသာစွာ ကွဲပြားခြားနားပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိသလို၊ သူ့မှာ စမ်းသပ်လို့မရနိုင်တဲ့Continue Reading